Dr. Nyo Nyo Thin Details | A2JI
Home Dr. Nyo Nyo Thin Details
Name: Dr . Nyo Nyo Thin
Dr. Nyo Nyo Thin became popular as an opposition female MP in the first Yangon Region parliament for her support for women's rights, anti-corruption, and rule of law, and became known asalone lion.
She submitted 40 motions and asked more than 400 questions in parliament from 2011 to 2015 to check and balance the government, and worked to halt projects that lacked transparency. She is one of the few MPs who publicly declared her assets during the 2015 campaign. She graduated from Yangon University in 1991 majoring in Law, and receivedamaster's degree in law in 1996.
Dr. Nyo Nyo Thin served asafaculty member of law at Yangon and Taunggu Universities and University of Distance Education for 13 years up to the level of lecturer. She was awardedascholarship in 2000 from Japan, and receivedasecond master's degree in law in 2003, then acquired her Doctorate of Law in 2006 at Yokohama National University. From 2007 to 2009, she worked asavisiting professor at the Peace and Governance Program of the United Nations University, and visiting lecturer at Hosei University, Keio University and Chuo University.
She was included in the "top 100 most powerful women" listed by BBC in 2014. She was also granted the Women's Rights and Political Award from the Myanmar Women’s Organizations Network, and the Emerging Young Political Leader Award from the U.S. State Department including International Republican Institute (IRI), US’s Wellesley Colleague, and Kennedy School of Government (Harvard University).
Name: ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်း
ဒေါက်တာညိုညိုသင်းဟာ ပထမအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော် ထဲမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေး/ လာဘ်ပေးလာဘ်ပေးယူမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့အတွက်တကောင်ထဲင်္ခြသေ့အမည်ခံအတိုက်အခံအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထင်ရှားလာသူဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၅ခုနှစ်ထိအစိုးရအားအဆိုပေါင်း၄၀နဲ့မေးခွန်း၄၀၀ကျော်မေးမြန်းထိန်းကျောင်းပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့စီမံကိန်းများစွာကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအများပြည်သူသို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့တဲ့တဦးတည်းသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လည်းမကြာခဏဖော်ပြခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်က ဥပဒေဘွဲ့နဲ့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ မဟာ ဥပဒေဘွဲ့ တိုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့တောင်ငူတက္ကသိုလ်တို့ရဲ့ဥပဒေပညာဌာနများမှာကထိကအဆင့်ထိ၁၃နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၀ပြည့်နှစ်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ပညာတော်သင်ဆုကိုရရှိပြီး၂၀၀၃မှာဒုတိယအကြိမ်မဟာဥပဒေဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ Doctor of Laws ဆိုတဲ့ ဥပဒေ ဒေါက်တာဘွဲ့ ရရှိကာမိခင်ဥပဒေပညာဌာနကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ယူ စာတမ်းဖြစ်တဲ့ “Democratization and it’s Discontents” ဆိုတဲ့ စာတမ်းကို ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂတက္ကသိုလ်ရဲ့ဆုချီးမြှင့်ရွေးချယ်ခံရခြင်းကိုထိုစဉ်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိအမှတ်မပြုခဲ့တဲ့အတွက်၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကိုထပ်မံထွက်ခွာခဲ့ပြီးဆုလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇ မှ ၂၀၀၉ အတွင်း တိုကျိုမြို့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ တက္ကသိုလ် (United Nations University, UNU)ရဲ့ Peace and GovermanceProgrammeမှာမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးဆိုင်ရာဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ်လည်းကောင်း Hosei University/ Keio University နဲ့ Chuo University များမှာ Visiting Lecturer အဖြစ် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။
ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ BBC ကရွေးချယ်တဲ့ သြဇာကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာ့ အမျိုးသမီး (၁၀၀) စာရင်းမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ ကွန်ရက်က ပေးတဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆု၊ International Republican Institute (IRI) အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Wellesley Collegue နဲ့ Kennedy School of Government (Harvard University)အပါအဝင် United State of Department တို့ကပေးတဲ့ တက်သစ်စနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဆုတွေကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၁မှ၂၀၁၅ထိနှစ်စဉ်သတင်းမီဒီယာများကပေးတဲ့ဆုအမျိုးမျိုးကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ မှာ Yangon Watch ကိုလည်းကောင်း ၂၀၁၇မှာ School of Law, Gender and Politics ( SLGP) တို့ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်သော သုတေသနစာတမ်းပေါင်းများစွာကိုကြီးကြပ် ပြုစုနေသူဖြစ်ပါသည်။